CODKA Jimcaha: - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Integrationsminister Nyamo Sabuni
Waxaa alabaabadda loo xirey Dusiyadii Xannaanadda Caruurta ee Bismilah. Kadib markii ay maamulka magaalada Istockholm ay dib ugala noqdeen ogolaanshihii iyo dhacaalihii lagu baxin jireyba.
Nin kamida labadii rag ee xabiska ku jirey, ee lagu eedeena hayey ineey maalgalin ku sameeyaan argagixisada dhinaca kala indabo marin dhaqaale lagu eedeeyay. Ayaa mid kamida Maxkamada lasoo hor taagey kaa soo lagu sii xukumey inuu xabiska sii jiifo labo asbuuc oo kale asaga oo aan laga ahlin. Taas waxaa codsadey xeer ilaaliyahay.
CODKA Khamiis 2008-03-13
Xisbiga FP, oo soo jeediyey in waxbarsho loo diro cidii dooneeysa ineey dhalashadda dalkaan qaataan. Fakarkaas oo ay dad badani u arkaan inuu jagay fakar xag jira. Laguna takoora hayo dadka soo galootigaa.
Dugsigii xannaanada caruurta ee Bismilah oo qarka u saaran in albaabadda loo xiro, maxeey ka yiraahdeen shaqaalihii xanaanada iyo waalidiin ka midda. Maxaase lagu heeystaa oo loo rabaa in laxiro.
Barnaamij ku soo celisa oo lagu baahinayey talefoon loo qoonteeyay haweenka ragoodu dilo. Telefonkaan oo ay soo diri karaan cidii aragta dumar dhib loo geeysana hayo. Sidoo kalana aya dumarku soo waci karaan si aya caawinaad u ’helaan.